HABABKA WAX KU OOLKA AH EE LOOGA HORTAGO MOTHWORT APPLE - GEED GEEDEEDKA
Maanta qofna laguma ilaaliyo cayayaan sida aboorka aboorka.
Waxay meel walbahaareysaa, dhulgooyinku waxay ka soo baxaan warshadaha warshadaha iyo dhulka.
Mararka qaarkood halganka la socda waxaa la daahinayaa bilooyin dheer ama xitaa sanado.
Goobo la burburiyey, dadaal badan, waqti iyo lacag lagu qaato burburinta bukaan-socodka - cidna ma rabto in ay tan mariso. Waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad naftaada ku baratid habab wax ku ool ah iyo badeecado ka sameysanaya aboorka, cadeeyeen mulkiilayaal badan oo geedka gooya, iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan wareegga bayoolojiga ee cayayaanka, oo hubaysan oo aad ku jiri doonto ilaa xad.
Codeynta boodboodka: helitaanka inuu ogaado cadowga
Maaha in laga yaabo in aboorka aboorka uu soo jiidan doono dareenkaaga marka uu u muuqdo beerta. Ka dib oo dhan, muuqaalka, waa wax aan fiicnayn in ay tahay gabi ahaanba ma dhicin. Intaa waxaa dheer, ma awoodo inay keenaan welwel gaar ah oo ku saabsan waxyeelladooda. Si kastaba ha noqotee, sida badanaa waa kiiska, ka danbeeya midabka qoorta loo yaqaan "cadowga khatarta ah ee dalagyada miraha. Tani waa cayayaan aad u weyn - xajmiga aboorka codka ah ee balastuurka waa 18-21 mm oo ku jira garbaha. Baalasha hore ee balastarka ayaa ah mugdi madow oo leh xariiqyo jilicsan oo madow oo ku yaal meel u dhow. Hindiya Hindiya waxay leedahay madow. Marka duufaanku ku dhacaan jilif ama laan dhir ah oo googo iyo baalashiisa baalasheeda, waxay noqonaysaa mid aan muuqan.
Si loo dhufto, aboorka ayaa habeenkii u duulaya. Ka bixitaankeeda waxay dhacdaa inta lagu jiro ubaxyada dhirta tufaaxa waxayna soconaysaa 1.5-2 bilood. 1-3 maalmood ka dib muuqaalka dhirta aan aboorka lahayn, waxay kuxadaysaa caleemaha, caleemaha, miraha midabka caanaha ee ukunta 1 mm ee size.
Hal shakhsi wuxuu awoodaa inuu jiifsado 40-120 ukun. Mustaqbalka, siisay cad cad oo leh madax madow ah oo ka soo baxa iyaga. Iyadoo da'da, midabkooda isbeddelaan casaan khafiif ah. Waa xayawaan ka mid ah aboor ku qaylinaya in cuno ugxan-yaryar, gasho miro, oo ka tago duufaan.
Muddo hal xilli ah, aboorka ayaa u muuqda laba ama saddex jiil. Khatarta ugu weyn ee geedaha khudradda waa tan labaad.
Ma taqaanaa? Jiilka koowaad ee aan lahayn aboor kuxinjir ah ayaa dhaawici kara 25% midhaha; kan labaad waa inuu burburiyo 80-90% dalagga.
Xilliga burburinta miisaanka waa 16-45 maalmood. Taas ka dib, waxay aadaan carrada ama jilif, halkaasoo ay abuurayaan kakooban jiilaal. Dhulka, waxay qaboobaan qoto dheer oo ah 3-10 cm, waxay kaloo ku nool yihiin hadhaaga dhirta, weelasha iyo goobaha midhaha lagu kaydiyo. Waxay ku dhalaan guga marka kuleylku ka sarreeyo 10 digrii.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro Maajo iyo ilaa dhammaadka Sebtembar, aboorka ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco dhammaan marxaladaha horumarinta. Dariishado ah jiilka koowaad iyo kan labaad ayaa ukumo ku jira muddada xagaaga. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u adag in la dagaallamo cayayaan.
Dhib beey ka careysiiso
Dhibaatada aboorka ma aha oo kaliya geedaha tufaaxa, plomme, isteroberi, quinces, abrikot, iyo fersken sidoo kale waxay la dhibaatoobaan waxqabadyada muhiimka ah.
Rinjiga waxay gashaa uur-jiifka iyada oo loo marayo barxadda dabayshu, dhaawac xagga diirka, oo hoosta caleenta. Meesha meeshii dixirigoodu googooyey, lowska ayaa u muuqda. Waxaa ka careysiisay bakteeriyaasha oo wata jidhkooda. Later, miraha waxyeello ayaa la doortaa.
Gaariga qaangaarka ah ee jiilka ugu dambeeya, oo midba midka kale u soo gurguurtaan, cunaan jidhkooda. Sidaa darteed, hal shakhsi ayaa ku dhufan kara laba ama saddex miro, mararka qaarkood xitaa shan.
Haddii miro khafiif ah uu dhulka ku dhaco, hal ama laba maalmood gudahood, waxay u wareegtaa si ay u sii socoto si ay u sii wado hawlaha waxyeellada leh ee midhaha kale ee geedka.
Hadda waxaad leedahay fikrad ah waxa aboor ku ah iyo inta uu waxyeelo u keeni karo tufaaxa miraha iyo geedo midho kale.
Marka xigta, waxaan kuugu soo bandhigaynaa sharaxaad dhowr siyaabood oo ah sidii looga takhalusi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in isticmaalka mid ka mid ah aysan u badnayn inay kaa caawiso inaad la qabsato dhibaatada. Xeelad isku dhafan oo keliya ayaa awood u leh inay bixiso natiijooyinka la rabay.
Waxaa jira saddex siyaabood oo ay ula macaamili karaan aboorka iyo siriyayaasheeda goobaha beerta:
Kuwa ugu waxyeellada badan, laakiin waxtar leh ayaa ah tallaabooyin ka hortag ah. Si aan ugu daadinno aboor ku beerta beertaada, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh u qodo ciidda ku jira jirridda guga dayrta. Nidaamkani wuxuu kaa caawin doonaa in laga saaro kakabka leh watalka dusha dhulka, meesha miraha ugu horeeya uu ku baabbi'in doono.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga takhaluso hadhaaga dhirta, kaas oo siisay sidoo kale hibernate. Guga hore iyo dayrta, daaweynta waxay u baahan tahay geedo cagaar ah. Goobaha hore, looga shakiyay meelo ka mid ah pupae, ayaa lagaa qaadayaa. Xayawaanka la jeexay wuxuu u baahan yahay in la gubo.
Ha iska dhaga tirin dhibicda. Waa lagama maarmaan in la doorto marar badan.
Dhirta Grassy ee soo jiidata cayayaanka, cadowga dabiiciga ah ee siisay, waxaa lagu beeray karaa meel u dhow. Sidoo kale, iyadoo la adeegsanayo quudinta qalabka ee beerta soo jiidata shimbiraha cayayaanka.
Butterflies ma istaagi karaan urta yaanyada. Sidaa darteed, waad ka cabsiin kartaa beerta adoo beeraya yaanyada ama shaararka, dill ku dhow.
Xilliga xagaaga, waxaad u isticmaali kartaa sida ilaalinta aboorka aboorka. suunka xayiraadda. Waxay sameeyaan sida soo socota. Dharbaaxada 25-30 cm waxaa laga jaraa warqad, maro, dhejis, waxay u baahan yihiin inay ku duubaan godka geed at fogaan ah 30-40 cm dhulka. Daboolka sare ee ku xiran xariga. Ha ku lifaaqin hoos.
Gawaarida, samaynta jidkooda miro ku yaal hoose, waxay ku dhici doonaan dabinka. Waxay u baahan doonaan in laga saaro lagana baabi'iyo halkaa. Gubashooyinka waxaa lagu xakameyn karaa koolada la karsado. Haddii uu geedku ka weyn yahay 20 sano, waxaad sidoo kale ku dari kartaa walax ama warqad leh betanaftol.
Sida dabin, waxaad isticmaali kartaa cajaladda caadiga ah ee caadiga ah ee ku xiran duqsiyada. Kormeerka suunka xayiraadda waa suurad wacan in la soo saaro ugu yaraan toddobaadkii hal mar.
Dufanka ayaa gacanta lagu qaban karaa. Sida ay u duulaan habeenkii, waxay soo jiidanayaan nalka iftiinka, ka dibna waa la qabsadaa oo la burburiyaa. Iyada oo laga eegayo ilka iftiinka waxaad u diyaari kartaa dabin leh cajalad ama dabacsan.
Ka dib marka la soo ururiyo miraha, weelasha ay ku kaydsan yihiin waxaa lagu daboolay warqad diirran. Rater wuxuu ka tagi doonaa. Konteenaradu waa inay ahaadaan kuwo aan kala go 'lahayn, si adag u xir. Ka dibna, warqadda diirran ayaa laga saarayaa oo la gubay. Weel ka hooseeya tufaaxa ayaa la nadiifiyaa waxaana lagu daaweeyaa biyo karkaraya.
Sannado badan oo iska hor imaad ah oo ay ku dhacaan aboor ku yaal geedka tufaaxa, bannaanka ayaa isku dayay habab badan oo ah halgan, oo ay ku jiraan daaweynta dadweynaha. Caanaha ugu badan ee la isticmaalo ee lagu buufiyo infusions iyo decoctions ee cayayaanka insecticidal: tansy, burdock, gooryaanka. Maraq la isku qalay, maraq tubaako. Qalabkani wuxuu leeyahay saameyn cabsi.
Mishiinka ugu horeeya ee infusions iyo decoctions waxaa la sameeyaa marka ubaxyo tufaaxa tufaaxa. Labada daweyn ee soo socda ayaa ah laba toddobaad gudahood. Moobeylku waxaa lagu sameeyaa fiidkii marka hawadu qalalan tahay.
Decoction Tobacco diyaariyay qiyaasta tubaakada tubaakada. Waa in loo fidiyaa 10 maalmood 10 litir oo biyo ah. Ka dib markii karkaraya laba saacadood. Ka dib markii maroojinta qaboojiyaha, baaldi kale oo biyo ah ayaa lagu daraa. Isla markiiba isticmaalka, 50 g saabuun ayaa lagu daraa xalka. Geedaha waxaa lagu daaweeyaa inta lagu guda jiro dhalashada ee miisaanka.
Waa muhiim! Sababtoo ah tubaakadu waxay leedahay suntan sunta ah, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo tallaabooyinka badbaadada shakhsi ahaaneed marka la daweeyo geedaha sifaha tubaakada sida maadada cayayaanka.
Karsami karaa decoction ee Gooryaanka. Geedka (1 kg) ku shub 1 l oo biyo ah kuna kari ilaa 20 daqiiqo. Ka dib markii maraq la qaboojiyey, baaldi biyo ah ayaa lagu daray.
Sidoo kale wax ku ool ah aboorka waa decoction ee basbaas cas. Waxaa loo diyaariyaa sida soo socota. Qaado pound of a pods basbaaska, ku shub 2 litir oo biyo ah, karkariyo saacad ah ee digsi leh dabool leh. Markaas maraq ku adkeyso laba maalmood. Ka dib sheygaas.
Isku buufinta, isticmaal nus litir oo maraq, oo lagu daray 10 litir oo biyo ah iyo 50 g oo saabuun ah. Dareeraha haray ayaa lagu kaydiyaa dhalo xiran.
Guryahooda boodhka ah ayaa la og yahay faleebo yaanyo. Wixii diyaarinta u isticmaal 4 kg ee yaanyada la jarjarey (tops, xididdada, miraha cagaaran), 10 litir oo biyo ah. Xalka ayaa la kariyaa saacad badhkeed, ka dibna la sifeeyo. Isku buufinta, qaado 3 litir oo dareere ah, 10 litir oo biyo ah iyo 50 g oo saabuun.
Diyaargarow kiimikada mootada
Daawooyinka kiimikada waxaa loo isticmaalaa oo kaliya marka ay dhacdo burbur ballaaran by aan aboor ku codsiga. Marka lagu xereeyo geedo tufaax laga bilaabo aboorka, waxaad ku ogaan kartaa iyadoo la adeegsanayo dabin feeraha, kaas oo ah in lagu dhejiyo goob beerta. Haddii wax ka badan shan shimbirood ay ku dhacaan hal usbuuc gudaheeda, macnaheedu waa inaan sameyn karno daaweyn kimiko ah oo geedo ah.
Dabcan, waxaa lagugula talinayaa inaadan keenin xaaladda ilaa meeshii ay lagama maarmaan tahay in la dalbado kiimiko. Isticmaal dariiqooyinka ugu horreeya ee halganka. Haddii aysan ku caawin, ka dibna dooro daroogooyinka ugu caansan deegaanka.
Cudurada daran, afar daaweyn ayaa lagula talinayaa. Mashiinka ugu horeeya waa in la sameeyaa inta lagu jiro xilliga dayax-gacmeedka, tan labaad - laba toddobaad, saddexaad - laba toddobaad kadib markii hore, afraad - ka dib goosashada.
Waxaa jira daroogo badan oo burburin kara siisay rinjiga. Waxyaabaha kiimikada, bayoolojiga iyo fayruska ayaa la sameeyay.
Noocan ah sunta cayayaanka, sida "Atom", "Binom", "Ditox", "Zolon", "Fufanon", "Sirocco", "Iskra-M", "Decis", iwm. Waxay awood u leeyihiin in ay dilaan siiyay xilliga laga soo saarayo sii daayo ukunta illaa hordhaca uurjiifka. Waa muddadaas oo ay u baahan yihiin in ay geedi socodsiiyaan.
Isticmaalka isticmaalka ogolaansho aboor daawooyinka pyrethroid: "Ivanhoe", "Calypso", "Sumi-alpha", "Kinmiks", "Fatrin", "Alatar". Kooxdani waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo 8-10 maalmood kaddib marka la tago dhiciska.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan daweynin aboor ku dhirta dhirta, isku day inaad isticmaasho qalabka hal warshad. Haddii maalinnimada aan wax saameyn ah laga helin, waxaad sii wadi kartaa geeddi socodka geedaha haray.
Sidoo kale geedaha tufaaxa waa la daweynayaa cygalotora: "Karate Zeon", "Kungfu", "Sensei", "Gladiator", "Borey".
In dagaalka ay aboor ku isticmaalaan xakamaynta koritaanka "Dimilin", "Match", "Herald", "Insegar".
Laga soo bilaabo diyaarinta nafleyda waxtar leh "Fitoverm" (oo loo isticmaalo xilliga laga sii daayo siidaynta ukunta laga bilaabo ukunta ilaa ay ka soo baxaan miro); "Lepidocide" (inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee jiilka kowaad, adoo raacaya muddada 10-14 maalmood), "Bitoxibacillin" (inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee jiil kasta oo leh isbeddel todobaad).
Dawooyinka viral Isticmaal marar badan. La ogol yahay: "Madex Twin", "FermoVirin YAP".
Waa muhiim! Si looga dhigo waxyeello yar intii suurtagal ah, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo daaweynta ugu horreysa iyada oo la adeegsanayo kiimikada, iyo in la isticmaalo daawooyinka nafleyda iyo hababka farsamooyinka inta lagu jiro buufinta xiga.
Si buuxda uga adkaado aboorka waxa kaliya oo la isticmaali karaa dhawr hab oo isku dhafan. Ha dayicin tiknoolajiyadda saxda ah ee beeraha, adoo siinaaya buufinta ka hortagga inta lagu jiro mudada lagu taliyey, bedelida diyaargarowga la isticmaalo, la shaqee mulkiilayaasha goobaha deriska ah, oo mar dambe ha u baahnayn inaad daawato tufaaxa digaaga beertaada.